Costa Rica: Diabe Fanehoan-kevitry Ny Vehivavy tsy Maoty, Foto-pinoana ary Zon’ny vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Aogositra 2011 12:03 GMT
Vakio amin'ny teny Svenska, polski, Español, Deutsch, English
Na dia niovaova aza ny fanehoan-kevitra momba ilay Diabe Fanehoan-kevitry Ny Vehivavy tsy Maoty, dia toa hoe ny tena fahombiazany dia ny fitarihana ny mponina hisaina ny herisetra mihatra amin'ny zaza amam-behivavy, ny finoana ary ny fanajàna.
"Tian'i Jesosy Ny Vehivavy tsy Maoty" nataon'i Julia Ardón, 2011
Ny herinandro lasa teo, Global Voices dia nampakatra lahatsoratra fanavaozam-baovao momba ny antony ambadik'io Diabe io :
Ilay Diabe dia ho valin'ilay fanambarana nataonà Mpitarika fivavahana Katolika iray sy Kardinaly nitsidika nanditry ny Fety masina ny 2 Aogositra, tamin'ny filazany fa tokony hiakanjo maotina ny vehivavy mba hisorohana ny fanambaniana sy ny fanaovana azy ho toy ny fitaovana, ary tsy hanao ny asan-dehilahy fa hikarakara ny ao an-tokantranony.
Arak'i Pablex, mpanao gazety sady bilaogera izay nanokana fotoana namakiana ny kabarin'ilay mpitondra fivavahana Ulloa ny 2 Aogositra , tsy nolazainy mihitsy ilay fehezanteny nataon'ilay gazety La Nación ho azy izay nahatonga fitroarana ka nampahery ilay Diabe :
Tsy ‘gourou’ i Ulloadia ary lavitra azy ny ho mpanao asa masina mihajan'ny Katolika ao Costa Rica. Fa ho fanomezam-boninahitra ny fahamarinana , tao amin'ny toriteniny (tsindrio eto raha hamaky ny lahatsoratra rehetra) tsisy mihitsy filazany ny teny navoakan'ny La Nacion, mangataka ny fahamaotinana eo amin'ny fomba fitafy ho an'ny vehivavy, zavatra izay mety ho “nomarihana” toy ny #peladadelamarchadelasputas tao amin'ny Twitter [Naoty – Marcha de las putas no fandikàna amin'ny teny Espanola ny hoe Diaben'ny Vehivavy tsy Maoty. Pelada , dia tenim-boto avy ao Costa Rica hilazàna ny hadisoana mahasosotra ary ny tenifototra #peladaNacion dia matetika ampiasaina hilazàna ny hadisoana ataon'io gazety iray io manokana.]
Pablex nanohy tamin'ny filazany fa very ny mety ho herin'ilay Hetsi-panoheran'ny Diaben'ny Vehivavy tsy Maoty noho ny fironan'ireo vehivavy tamin'ny antsipirihan-javatra kely tsy misy dikany momba ny endriky ny tsy rariny rehetra atrehan'ireo vehivavy ao Costa Rica ary zavatra mivaona mihitsy ny nampifantohan'izy ireo ny hatezerany ho any amin'ny fiangonana tamin'ny fomba tsy misy fanajàna::
Koa na dia nilaza aza i Ulloa fa ny vehivavy avy ao Costa Rica dia “mila miakanjo maotina “, dia tsy manamarina velively ireo ompa , fanarabiana, faniratsirana ary tsy fisian'ny fanajàna nasehon'iity vondronà mpankafy sy mpanakorontana ity, izay naneho izany ny Alahady maraina teo anoloan'ny Katedraly Metropolitana / Katedraly Reniny. Ny fandeferana izay nangatahan'izy ireo fatratra tamin'ny Fiangonana dia nirodana vetivety, vetivety kely, toy ny halavan'ny zipon'ireo Vehivavy tsy Maoty.
"Efa nilaozantsika ela ny Moyen Age " nosoratan'i Julia Ardón
Rashida Jenny Torres nanoratra momba ny fomba fijeriny amin'ny maha Silamo azy ao Costa Rica mikasika ilay Diaben'ny Mpivarotena, ary na dia tsy mitovy finoana amin'ny Fiangonana Katolika aza izy, mino izy fa ilay Diabe dia nampiseho tsy fanajana ny Vehivavy Silamo toa azy koa : Ny sasany tamin'ireo vehivavy nandray anjara tamin'ilay Diabe dia nanao saron-tava silamo hampisehoana ny endrika famoretana atrehan'ny vehivavy. Ho an'i Rashida Jenny, ilay Diabe dia lasa fanamoràna tsy mahomby ho an'ny raharaha sarotra toy ny Zon'ny Vehivavy.
Izaho , amin'ny maha vehivavy, reny , mpiasa ary Silamo ahy ary mitondra ny saron-tava izay safidiko manokana, dia mahatsapa fifaliana hatrany amin'ny fomba fiakanjoko, amin'ny maha izaho ahy sy izay soloiko tena, mahatsapa fa ny karazana hetsika toy itony dia tsy maneho ny zon'ny vehivavy mihitsy na ireo tsy misy mpiahy mba hanana fiarovana ara-batana na koa ara-pananahana.
Tsy najaina aho na dia mirakotra be tahaky ny inona aza, ary amin'ny firenena tahaka itony izay tsy Silamo, ny olona tsirairay dia afaka mitafy izay tiany.
Fony izaho tanaty fiara fitaterana handeha ho any ampiasana dia tratrako ireo lehilahy nanainga antsokosoko ny zipoko hijery sao mba ho afaka hanopy maso kely ny hato-tongotro.
Andrea Aguilar Calderón nanoratra momba ilay Diabe ihany koa, ary nanazava ny antony tsy nandraisany anjara tamin'ilay Diaben'ny Vehivavy tsy Maoty, na dia raisiny ho toy ny Mpivarotena aza ny tenany. Tao anatin'ny lahatsorany ” Vehivavy tsy Maoty aho fa tsy nandeha tamin'ilay Diabe” dia nanoratra izy hoe toy ny ahoana ny fiedinediny nidina an-dalambe raha toa ka naompana tamin'ny hatezerana amin'ireo ambaratongam-pahefana ampolony manao famoretana vehivavy izany, fa tsy voatery hoe tanjona kely mikasika ny Fiangonana Katolika :
Kanefa niaraka tamin'izay, mahatsiaro tena ho isan'ireo olona manao izay hahasarotra ny fiainan'ireo vehivavy aho, tamin'izay andro sy taona izay, fa tsy pretra.
Ny toriteny izay manjaka eo amintsika dia hafa mihitsy ary tsy hita ao anaty baiboly. Fa hita eny amin'ny fahitalavitra, izay mazava ho azy fa mandeha any an-tsekoly ny vehivavy, satria manan-jo hianatra izy ireo, kanefa mandeha miaraka amin'ny zipo kely ao amin'ny RDB [Fanamarihana.- andian-tantàra Meksikana ho an'ny tanora ]. Na ny tsaratsara kokoa: hita any amin'ireny sekoly ambaratonga faharoa eto amin'ny firenentsika ireny ry zareo, izay ahitanao vehivavy ampolony mitondra pataloha mifinjifinjy izay toy ny voalokon-dry zareo isa-maraina alohan'ny hiaingana, vonona ny hilalao ny lalaon'ny maha ‘mafàna’ ao anatin'ny taonan-jatovon'ny faha teloambinifolo-taonany satria izany no voalohan-tanjon'ny vehivavy eo amin'ity fiainana ity. Tsy io no goavana indrindra sy maro an'isa mibahan-toerana mitandrina ny toritenin'ny pretra ery ambony alitara, saingy kosa ireo mampifantoka ny masony amin'ireo vehivavin'ny Pilsen mandihy eo ambony latabatry ny trano fisotroana ary mamely ireo tovovavy mpifanolo-bodirindrina mitondra tatinono nabontsina be ho anaty ‘lasitra’ iray. Tsy izany velively no zavatra mahatahotra ny olona, fa ny fanilihana ara-tsosialy / fanilihan'ny fiaraha-monina: noho ny maha-katavy, sipa lany zara, mpamosavy tsy nanao efa ho volana iray.
"aza tenenina anay ny tokony ho fiakanjonay, teneno ry zareo tsy hanolana anay " nataon'i Julia Ardon
Ny Filankevitra Ekonomikan'ny Fiangonana Katolika dia nanambara fa ilay diaben'ny Vehivavy tsy Maoty dia manitsakitsaka ny lalàna mifehy satria nanetsika fankahalana sy herisetra atao aminà finoana iray voafaritra. Ny mpikarakara ilay Diaben'ny Vehivavy tsy Maoty tao Costa Rica dia nandefa fanambarana an-gazety, izay hita ao amin'ny Facebook, ka ao no nanazavany fa tsy nitarika ho amin'ny herisetra mihitsy izy ireo ary amin'ny maha seho fanta-daza aza mandeha eraky ny tambajotra ara-sosialy rehetra dia nahasarika olona maro manana hevitra isan-karazany ary azo heverina fa ny hany teboka niraisana dia ny fanaratsiana ny fomba fitondran'ny fiarahamonina ao Costa Rica ny vehivavy.
Ao amin'ilay fanambaran'izy ireo dia voatonona i Julia Ardón, izay nandray anjara tamin'ilay Diabe ary ny sary nalainy nandritra ilay Diaben'ny Vehivavy tsy Maoty dia mandravaka ity lahatsoratra ity ( nahazoana alalana taminy) :
Ny maha samihafa ny Diaben'ny Vehivavy tsy Maoty ao San Jose sy ireo fahita any amin'ny firenen-kafa :
1. Mifandray tànana miara-mitaky ny fanajàna sy fahamendrehana ho an'ny vehivavy rehetra, misy koa fitarainana manoloana ny herisetra ataon'ny Fiangonana Katolika amin'ny fomba fitondra ara-batana ny vehivavy, ary antso avo ho an'ny fanjakana laika ankehitriny.
2. Ny zavatra mahaliana indindra : Ilay Diabe, nomanin'ny andianà mpiaro ny zon'ny vehivavy, nahitàna fandraisan'anjaran'olona amin'ny sokajin-taona rehetra sy avy any rehetra any; manodidina ny 50% dia lehilahy avokoa, izay nahatonga azy io ho Diabe niavaka tokoa.
Nadio ilay izy, nahafinaritra, nahafatifaty fa ny ambonin'izany rehetra izany : Feno fanajana sy faharisihana. Faly aho fa anisa'ny nandray anjara tao ary nahita namana maro tao. Ankehitriny aho mahatsiaro tena ho sambatra fa isan'ny mpiara-monina eto Costa Rica. Betsaka ny zavatra tsara andalam-pahaterahana ao. Mahatsapa ho feno fanantenana aho.
Fahasamihafana tao amin'ilay Diaben'ny Vehivavy tsy Maoty Sary an'ilay bilaogera Julia Ardón
Ilay bilaogera Bryan Gonzalez koa dia nanoratra momba ny fanohanany ny Diaben'ny Vehivavy tsy Maoty ary ny seho ara-javakanto mampiseho ampaham-batana miboridana sy fanao vetaveta mahasaringotra ny Fiangonana Katolika:
Mahakasika ilay seho natao tamin'ny fotoanan'ilay Diabe, dia tehafako mihitsy ireo mpilalao vehivavy sy lehilahy, ireo no tena nahay naneho ny herisetran'ny lehilahy Katolika mihevitra azy ireo ho tapitr'ohatra . Nahatezitra ny Fiangonana izany ary namafisiny fa fanaovana tsinontsinona ny toetra maha-olona ny zavatra tahaka izany (ho an'ireo izay mora tohina). Kanefa tsy misy zavatra mahatohina sy tena fanaovana tsinotsinona ny olona afa-tsy ny ambaratongam-pitantanana ao amin'ny Fiangonana Katolika izay manafina olona mpanadàla sy mpanolana. Maninona no tsy miresaka izany ny Filankevitra Eokominikan'ny Katolika? Maninona no miresaka fampiakarana fitsarana aminà artista roa izy ireo fa tsy aminà mpanolana sy amin'ireo izay manafina azy ireo ? Ary ahoana ny momba ireo fanodikodinam-bola nataonà Filankevitra Eokominika : Moa tsy mandona ny sain'ny vahoaka koa ireny?
Ireo fanehoan-kevitra mahakasika ilay “seho” nambara etoana dia azo vakiana anaty tsikera 105 izay vetivety dia lasa ady tao amin'ny Facebook teo ambanin'ny sarin‘ilay vehivavy mpilalao, misy azy matory amin'ny tany ary ny tratrany dia feno soratra sy rojo vy no sady manaikitra “chapelet”, miaraka amin'ny totohondrin'olona tsy tazana eo anelakelam-peny miboridana. Raha nanasokajy io fampisehoana io ho seho artistika ny sasany, ny hafa nanao azy io ho fanalam-baraka ny tena ataon'io vehivavy io sy fanaovana tsinontsinona ny Fiangonana.
Ilay bilaogy Suicidal Bunnies dia nilaza ny heviny ihany koa mikasika ilay Diaben'ny Vehivavy Tsy Maoty, ka ao i Amorexia no manoratra fa na dia maro aza ireo fitakiana tsy nozarainy, mino izy fa amin'ny ankapobeny dia nahafinaritra ilay lahasa, fitarainana marim-pototra izay nampahery kokoa noho ny nilaina. Nizara lahatsary mikasika ilay Diaben'ny Vehivavy Tsy Maoty tao Costa Rica ihany koa izy, izay ahenoana ilay hiaka hoe “Tsia dia tsia, hoy aho hoe tsia. Inona amin'ireo no tsy azonao, ilay TS sa ilay IA?” any am-panombohan'ilay lahatsary raha nilahatra teo anoloan'ny Katedralin'i Metropolitan ireo mpandray anjara :
Ny sary rehetra nampiasaina tao anatin'ity lahatsoratra ity dia an'i Julia Ardón, mpaka sary sy bilaogera avy ao Costa Rica ary nahazoana alalana avy aminy.